Vatori Venhau Voramba Vari Muhusungwa
Kubvumbi 04, 2008
Mapurisa akatora akachengetedza vanhu vashanu vakatorwa paYork Lodge iri muHarare neChina. Vamwe vevanhu vakatorwa vanosanganisira muridzi weYork Lodge, avo vakazoregedzwa. Asi vatori venhau vaviri vanosanganisira Barry Bearak, avo vanonyorera New York Times yekuAmerica neBritain, vanonzi vachiri muhusungwa.
Dzimwe nyanzvi mbiri dzemichina inoshandiswa pakutepfenyura dzekuSouth Africa, dzakasungwa musi wa 27 Kurume, dzamiswawo pamberi pedare neChishanu dzichipomerwa mhosva yekutyora mutemo weAIPPA. Asi vaviri ava vanonzi vabva vasungwa zvakare.
Mutori wenhau weStudio 7, Carole Gombakomba, aita hurukuro naVaWilbert Mandinde-, gweta rinoshanda neMISA-Zimbabwe, avo vanga vakamirira vaviri ava kuti tinzwe zviri kuitika.
Zvichakadaro, mumwe wevanorwira kodzero dzevanhu, VaCharles Mutama, neChishanu vakaratidzira vari voga pamuzinda weZimbabwe muAmerica, vachigunun’una nekusabuditswa kwezvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika.
Mushure mekutaura neStudio7, VaMutama vanoti kwazoidaidzwa veSecret Service, avo vazovaperekedza kupinda mumuzinda weZimbabwe mu America, umo vataura naVa Wilbert Gwashavanh.
VaMutama vanoti VaGwashavanhu vavaudza kuti havaziviwo zviri kuitika, uye vakatomirirawo kunzwa kubva kune veZEC. VaMutama vazopihwa nhamba dzenhare dzaVa Mapuranga, kuti vazotaure navo parunhare.
VaMutama vanoti vaGwashavanhu vaudza kuti vanyadzisa muzinda weZimbabwe nekushambadzira kwavanga vachiita neloud speaker.